ကဗျာဆန်တဲ့လက်ဖျံ: ဥပဒေသ (၁) ကိုယ့်အထာနဲ့ကိုယ်
ခင်ဗျား အမှန်တစ်ကယ် သဘောကျတဲ့သူတစ်ယောက်ကို တွေ့တဲ့အခါ ခင်ဗျားကိုခင်ဗျား အသစ်ပြန်လည်မွေးဖွားဖို့ ကြိုးစားဖူးသလား။ ဒါမှမဟုတ် ခင်ဗျားစိတ်ထဲက သူသဘောကျမယ်ထင်တဲ့ ပုံစံတစ်ခုခုကို ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစားဖူးသလား။ ခင်ဗျားဟာ (သူ့အကြိုက်) သိပ်ကို ဆန်းကြယ်တဲ့သူ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာတဲ့သူ၊ တည်ငြိမ်တဲ့သူ ဒါမှမဟုတ် အံ့သြစရာအပြည့်နဲ့သူ ဖြစ်ချင်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
အနည်းဆုံးတော့ ကာလံဒေသံ မသင့်တော်တဲ့ အခိုက်အတန့်တွေမှာ ဟာသတွေလုပ်ပြီး ကိုယ့်အရှက်ကိုပြန်ခွဲနေတာမျိုးကိုသော်လည်းကောင်း၊ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းတဲ့အခါ
တကယ်တော့.... ခင်ဗျား မရပ်ပစ်နိုင်ဘူး! အလွန်ဆုံး ခင်ဗျား ထိန်းထားနိုင်ရင် တစ်ညနေ၊ နှစ်ညနေ ဒါမှမဟုတ်ရင် တစ်လ၊နှစ်လပေါ့။ တစ်သက်လုံး ဒီအတိုင်းနေသွားဖို့ဆိုတာကတော့
သိပ်ကိုခက်နေလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ ခင်ဗျားအနေနဲ့ ဒီတစ်ယောက်ဟာ သေချာတဲ့တစ်ယောက်.. ခင်ဗျားသဘောပေါက်တယ်မလား.. The ONE .. ဆိုရင် ခင်ဗျားဘ၀ရဲ့ နောက်လာမယ့် ရာစုနှစ်တစ်ဝက်လောက်ကို သူနဲ့အတူတူ ကုန်ဆုံးရမယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားသဘောပေါက်မှာပါ။ စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါ၊ နှစ်ငါးဆယ်လောက်ကို ခင်ဗျားရဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက်တွေကို သူမသိအောင် ချိုးနှိမ်ပြီး ဟန်ဆောင်နေရမယ့်အဖြစ်ဟာ ဘယ်လောက် စိတ်ဆင်းရဲစရာကောင်းလိုက်မလဲ။
ဒီလိုတော့ ဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူး၊ ဟုတ်တယ်မလား။ ခင်ဗျားဘ၀ရဲ့ အချိန်တွေကို ခင်ဗျားကိုယ်တိုင် ဖန်တီးထားတဲ့ အတုအယောင်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတစ်ချို့နောက်မှာ ငုတ်လျှိုးပျောက်ကွယ်သွားစေမလား။ မှန်းဆကြည့်ကြရအောင်ပါ။ ခင်ဗျားချစ်တဲ့သူကို စွန့်လွှတ်လိုက်ရမှာ မခံနိုင်လို့ လုံးဝခင်ဗျားမဟုတ်တဲ့ ပုံစံတစ်ခုကို ပေးမသိဘဲ ဘယ်လို၊ ဘယ်လောက်ကြာကြာထားမလဲ။ တစ်ပတ်၊ တစ်လ၊ တစ်နှစ်အတွင်းမှာ သူသိသွားလို့ ခင်ဗျားအထုပ်ပြည်သွားမယ်ဆိုရင်ကော။ သူ့အနေနဲ့ ဘယ်လိုမှ လက်ခံနိုင်မှာ မဟုတ်သလို ကိုယ်မြတ်နိုးမိတဲ့သူက ခုလိုမျိုး တစ်လျှောက်လုံးသရုပ်ဆောင်ပြသွားတယ်ဆိုတာကို သိလိုက်ရတာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေလည်း လက်ခံနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလေ။
ခင်ဗျားအနေနဲ့ စာမျက်နှာသစ်ကို မဖွင့်သင့်ဘူးလို့ ကျွန်တော် ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော့ အတတ်နိုင်ဆုံး မြှင့်တင်ပြောင်းလဲရမှာပါ။ အချစ်ကိစ္စတစ်ခုထဲသက်သက်တင်မက၊
ဘယ်အချိန်မှာမဆို ဒါမျိုးကတော့ လုပ်နေရမှာပါပဲ။ သေချာတာကတော့ ခင်ဗျား ခုလက်ရှိထက် နည်းနည်းပိုပြီး အခြေကျလာရမယ်၊ အဆိုးမြင်တာတွေ လျှော့ရမယ်။ (အသေးစိတ်တွေ နောက်မှ ဆွေးနွေးကြတာပေါ့။)
ခင်ဗျားရဲ့ အမူအရာတွေကို ပြောင်းတာဟာ ကောင်းတဲ့အလုပ်ပါ။ ဒီဥပဒေသက ခင်ဗျားရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး/စရိုက်လက္ခဏာကို မပြောင်းဖို့သာ ပြောတာပါ။ အလုပ်မဖြစ်လို့ပါ။ အလုပ်ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားနေရင်းနဲ့ ခင်ဗျားကြိုးနဲ့ ခင်ဗျားပြန်ချည်နှောင်မိသွားနိုင်လို့ပါ။
ဒါကြောင့် ကိုယ့်ပုံစံအတိုင်းပဲ ရှိပါစေ။ အားလုံးကို အရှိအရှိအတိုင်း ဖွင့်ချပြလိုက်ပါ။ ကိုယ့်ပုံစံဟာ သူရှာနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်း အနည်းဆုံးတော့ သူသိမသွားခင်
နောက်ဆုတ်လိုက်ဖို့ ခင်ဗျား သိပ်နောက်မကျသေးဘူးပေါ့။ ပြီးတော့ ခင်ဗျားသိလား၊ လူတွေက ဆန်းဆန်းပြားပြားတွေကို တကယ်တော့ မကြိုက်ကြပါဘူး။ ခင်ဗျားအနေနဲ့ သိပ်ကို ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ပြတ်သားလွန်းလို့ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ခေါင်းမာလွန်းတယ်လို့ ပြောချင်ပြောကြလိမ့်မယ်။ ခင်ဗျားဟာ ဟာသတွေ ပြောတတ်၊လုပ်တတ်လွန်းလို့ တစ်ခါတစ်ရံမှာ အလေးအနက်ထားတတ်ရဲ့လားလို့ သံသယ၀င်ချင် ၀င်ကြပါလိမ့်မယ်။ ခင်ဗျားဟာ သိပ်ကို အေးအေးနေတတ်လွန်းလို့ လောကကြီးအကြောင်း ဘာသိလဲလို့ မေးချင်မေးကြပါလိမ့်မယ်။
ထားလိုက်ပါ။ ခင်ဗျားမှာ ခင်ဗျားရဲ့ပုံစံတစ်ခု ရှိနေသရွေ့ ခင်ဗျားရဲ့ ပင်ကိုယ်စရိုက်လက္ခဏာနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့တစ်ယောက်ကို တစ်ချိန်ချိန်မှာ ခင်ဗျား တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
ခင်ဗျား အတုလုပ်ထားမိရင်လည်း ခင်ဗျားမဟုတ်တဲ့သူတစ်ယောက်နဲ့ ထိုက်တန်တဲ့သူကို ခင်ဗျား ချဉ်းကပ်မိနေတယ်ဆိုတာလည်း ခင်ဗျား မြင်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ ဘာများအကျိုးရှိပါမလဲလေ။
အပြင်လောက တစ်နေရာရာမှာ လက်ရှိခင်ဗျားပုံစံအတိုင်းကို လိုချင်နေတဲ့သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်တော့ ရှိနေမှာပါ။ အဲ့ဒီတစ်ဦးတစ်ယောက်ဟာလည်း ခင်ဗျား မှားနေကျ အမှားတွေ၊ လွဲနေကျ အလွဲတွေကို လက်ခံနိုင်တဲ့သူဆိုတော့ ခင်ဗျားအတွက် လုံလောက်ပါတယ်။
တစ်ခုပဲ မှာလိုက်ပါရစေ။ သူက ခင်ဗျားရဲ့ ပေါက်တတ်ကရတွေ၊ အလွဲလွဲအချော်ချော်တွေကို အမှားတွေ၊ အလွဲတွေလို့ မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ခင်ဗျားမှာပဲရှိတဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ စွဲဆောင်မှုလို့ပဲ မြင်ပါလိမ့်မယ်။ သူထင်တာ မှန်ပါတယ်လေ...။ ။
The Rules of Love - Richard Templar ကို အဓိကမီငြမ်းထားတာပါ။ သူ့ဟာများများ၊ ကိုယ့်ဟာနည်းနည်းပေါ့။ :)
Posted by Soe Htike at 11:53:00 PM